Mapisarema 113 - Bhaibheri Dzvene [Shona Bible 2009]
&nbspHareruya! Rumbidzai, imwi varanda vaJehovha, Rumbidzai zita raJehovha.
&nbspZita raJehovha ngarikudzwe Kubva panguva ino kusvikira pakusingaperi.
&nbspKubva pakubuda kwezuva kusvikira pakuvira kwaro Zita raJehovha rinofanira kurumbidzwa.
&nbspJehovha uri kumusoro kwavahedheni vose, Nokubwinya kwake kumusoro kokudenga-denga.
&nbspNdianiko akafanana naJehovha Mwari wedu, Iye anogara kumusoro,
&nbspIye anozvidukupisa kuti aone Zviri kudenga napasi?
&nbspAnosimudza murombo abve muguruva, anomumutsa abve padurunhuru;
&nbspKuti amugarise pamwechete namachinda, Iwo machinda avanhu vake.
&nbspAnogarisa mukadzi asingabereki mumba,ave mai vanofara navana. Hareruya